बेलैमा सचेत हौं - BirtaJyoti
super userSeptember 8, 2020 2:00 am 0
अहिले भर्खरको रिसर्चबाट प्रमाणित भएको छ । ७५ प्रतिशत भन्दा बढी कोभिड १९ बाट जोगिने उपाय भनेको अनिवार्य मास्क लगाउनु हो ।
सबैले मास्क अनिवार्य लगाउने ,एउटै कोठा भित्र मास्क लगाए पनि भिडभाड नगर्ने, भौतिक दुरी कायम गर्ने ,साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने।
नाक मुख खुल्ला राखेर गर्नुपर्ने काम होस् या खाना खाने काम होस् सार्वजनिक ठाउँमा नखाने, नगर्ने, भिडभाडमा नजाने, नगर्ने, दुरी कायम गरेर पालै पालो किनमेल गर्ने । निश्चित दुरीमा बसेर यातायातको साधन प्रयोग गर्ने ।बाटोमा हिड्दा दुरी कायम गर्ने र त्यो बेला मास्क कुनै हालतमा नखोल्ने।
सामाजिक सस्थाहरु एवम् सरकारमा रहेका नरहेका सबै राजनैतिक दलहरुले आफ्नो पहुचका आधारमा सबै जनतालाई सचेत गराउनुपर्ने अवस्था हो यो ।सरकारलाई यो समस्यामा साथ दिन जती जरुरी छ त्यती नै सजग गराउनु पनि जरुरी छ । पार्टीहरुले ध्यान दिउन ।
यि कुराहरु जनताले गर्ने कुराहरु हुन । सरकारले हाम्रो लागि गर्ने होइन । सुरक्षाको उपाय आफुले गर्ने हो । यती कुरामा जनता सचेत भए लकडाउन गर्ने ,पसल बन्द गर्ने ,यातायात ,हवाइ सेवा बन्द गर्ने काम गरिरहनु जरुरी छैन।
कतीपय सस्थाहरु अहिले तत्काल खोल्दा घातक पनि हुनसक्छ तर राम्रोसँग समिक्षा गरेर सुरक्षा सर्तकता अपनाएर खोल्नु पर्ने ब्यापारिक सस्था, उधोगधन्दा खोल्न दिनुपर्छ । यस्ले मुलुकलाई थोरै भए पनि गतिशिल बनाइराख्न सहयोग पुर्याउछ ।
अनी मुख्य कुरा, सरकारले सम्बेदनशील भएर सोच्नुपर्छ कि यस्तै बन्द सधैं भईरह्यो भने अर्थ ब्यबस्था चौपट हुन्छ अनी कोरोना घटेपछि देशमा एकै चोटि अराजक स्थिती उत्पन्न हुनसक्छ ।
अर्थतन्त्र तहसनहस भएपछि सबै जनताहरु सडकमा आएर आन्दोलन गर्नुको बिकल्प छैन अझ अर्को लुटमारको डरलाग्दो स्थिती न आऊला भन्न सकिन्न । त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै अर्थतन्त्र चलायामान बनाउनुको बिकल्प छैन । ठुला ठुला शक्ती राष्ट्रहरुले यही बिधी अपनाएका छन ।
टेकनाथ रिजाललाई दिइएको सहयोगको हिसाब खोई ?
super user- August 31, 2018
सानो सानो समूहगत प्रयासबाट उपलब्धी हाँसिल हुन नसक्नेस्थिति देखिएपछि एनएफडी–भूटानको आ≈वानमा २ मार्च २००६ मा पूर्वी नेपालको विर्तामोडमा सर्वपक्षीय छलफल आयोजना गरियो । छलफलबाट आन्दोलन ... Read More
माग्नेहरुको देशः बंगलादेश
super user- June 9, 2020
कतिपय बिषय यस्ता हुँदा रहेछन् । त्यो देश अनुसारको पहिचान बन्छ । दुःखद् बिषय, हामीले बंगलादेश बसुन्जेल एउटा कुराको मसिनो गरी अध्ययन गर्यौं । के ... Read More
भर्च्र्युअल मनको भर्च्र्युअल कथासंग्रह : मनोनेट
super user- March 29, 2020
गौरीशंकर पुस्तक पसल बिर्तामोड, जुन मैले बिर्तामोडमा शिक्षण गर्न थाले चिने जानेको पसल हो । २०६२ साल तिर यो पुस्तक पसल एउटा ठेलामा थियो । ... Read More
NEWER POSTसरकारको निर्देशन बिपरित असोज अघिको पनि शुल्क असुल्दै निजी बिद्यालय
OLDER POSTसरकारी कार्यालयको कोठा भित्र पस्दा जुत्ता खोल्ने कि नखोल्ने ?
शान्तिपुरका विद्यार्थीले पाए कपडा र स्टेशनरी
विशिष्ट व्यक्तिका लागि महँगो हेलिकप्टर आइपुग्यो
नेपाल पशुपंक्षी औषधी व्यवसायी संघको प्रदेशस्तरीय समिति गठन
मनोज गजुरेल सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको सद्भावना पर्यटन दूत
सिरीजङ्घा गाउँ पालिकाको नवौं गाउँ सभा
नगर अस्पतालको फार्मेसी टेण्डर प्रकृयासम्मत रहेको ठहर
मेन स्टोरी (288)
स्थानीय समाचार (155)